Parsỳ - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Parsy (vahoaka))
Ny Parsỳ na Parsa dia vahoaka iraniana nifindra monina any India, mba hahafahan' izy ireo manohy ny fanarahany ny fivavahany, dia ny parsisma, fivavahana nisampana avy amin' ny zôrôastrisma. Iray amin' ireo fianakaviambe zôrôastriana monina any India ny Parsỳ (ka ny faharoa dia ny Irany). Atao hoe પારસી izy ireo amin' ny fiteny gojaraty. Tamin' ny taona 2012 dia miisa eo anelanelan' ny 111 700 sy 121 700 ny Parsỳ maneran-tany, ka 61 000 ny tao India, teo anelanelan' ny 15 000 sy 25 000 ny tao Iràna ary 14 405 ny tany Etazonia.
Tamin' ny fahazoan' ny Miozolmana an' i Persia dia nandositra any Atsinanana ny Parsỳ sasany ka nanorim-ponenana tany India. Tao Sindi sy tao Saurāshtra any Gujarat no nonenan' ny Parsỳ voalohany. Nanararaotra ny fiarovan' ny mpanjaka Jadi Rana azy ireo tamin' ny taonjato faha-8 izy ireo. I Jadi Rana dia nanjaka tamin' ireo Fanjakan' i Thana ao akaikin' i Mumbai (na Bombay) ankehitriny. Toa ny fianakaviambe jiosy monina any India dia malalaka ny fivavahana zôrôastriana any India.
Mivavaka amin' ny afo ny Parsỳ ary tsy mandoro faty mba tsy handoto izany afo izany. Famantaran' ny fahazavan' Andrimanitra ny afo amin' ny Parsỳ. Mba tsy handotoana ny tany koa dia tsy alevina ny fatin' ny Parsỳ fa apetraka amin' ny tilikambon' ny fahanginana (atao hoe dakhmā) mba hihinanan' ny voromahery voltora ny nofon' ny olona maty.
Jereo koa[hanova | hanova ny fango]Modifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Parsỳ&oldid=999104"
Dernière modification le 19 Desambra 2020, à 11:09
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2020 amin'ny 11:09 ity pejy ity.